व्यावसायिक च्याउखेतीमा रमाउँदै अर्याल - समय-समाचार
समय-समाचार आईतबार, २०७८ असोज ३१ गते, ०६:५८ मा प्रकाशित
अर्यालले हालसम्म च्याउ बिक्रीबाट ४० लाख आम्दानी गर्नुभएको बताउनुभयो । शुरुका वर्षहरुमा लगानी धेरै भएपनि अब केही वर्ष लगानी नगरी आम्दानी लिन सकिने अर्यालको भनाइ थियो । शुरुका २÷३ वर्ष निक्कै संघर्ष गर्नुपरेपनि पछि सहज भएको छ । उहाँले सीताके च्याउ प्रतिकेजी रु. ५०० र कन्य च्याउ प्रतिकेजी रु. २५० मा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । “उत्पादन गर्न झ्याउ मान्न भएन, उत्पादन जति गरेपनि बजारको कुनै समस्या छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादन भएको च्याउ काठमाडौं, पोखरासहितका स्थानीय बजारहरुमा खपत हुँदै आएको छ ।”